I-Starfield: Konke odinga ukukwazi kusukela Kudethi Yokukhishwa kwayo, Ukusakaza, kanye Nesakhiwo kuya ku-Trailer yayo! - Ukudlala
Idethi yokukhishwa kwe-Starfield
Funda kabanzi ngombungazi, u Starfield
I-Starfield's Gameplay: Izindaba Zakamuva namahemuhemu
Iphrothokholi entsha ye-inthanethi evela ku-Bethesda Gaming, i-Starfield, kulindeleke ukuthi ifike ku-Xbox PC ngo-2022, futhi ithembisa ukusihambisa ohambweni lobuciko obukhululekile obumangalisayo.
Ukucaciswa okumayelana nenkundla yezinkanyezi kuyindlala okwamanje, kodwa ngenxa yeziqeshana ezimbalwa zokubuka kuqala nemifanekiso, abalandeli bangathola umuzwa wokuthi umeshi uzobukeka kanjani.
I-RPG yomdlali oyedwa ka-Ubisoft, okuyiphrothokholi ye-inthanethi entsha yokuqala yenkampani emashumini amathathu eminyaka, izobe isihambisa abadlali esikhathini esizayo kanye ne-interplanetary, lapho kuyodingeka khona ukuthi babambe iqhaza emdlalweni wegeyimu oyisithombe ohlanganisa ukuba nethemba kanye nobubele, umqondisi wefilimu u-Todd Howard. ichaze njengefana ne-Pubg endaweni.
Ngaphandle kweqiniso lokuthi i-Starfield izokwethulwa ngokusemthethweni ngoNovemba 2022, kuzofanela silinde isikhathi eside ngaphambi kokuthi sithole izandla zethu kuyo. Ngaphandle kokulibaziseka, sithenge ukubhukha kokuqala ku-Starfield bandwagon futhi sikubheke ngabomvu.
Ukulangazelela isitolimende sokudubula kungenye yezindlela ezisebenza kahle kakhulu zokuvusa intshisekelo yakho (noma ukubuka inkanyezi kulokhu). Eqinisweni, sichithe isikhathi esanele kulawo mandla empilo sicinga indawo yonke ukuze sithole ulwazi lwakamuva lwe-Starfield nolwazi lokuqagela.
Funda futhi: Idethi yokukhishwa kuka-Norco, i-trailer, itulo, nokunye kulapha!
U-Bethesda ukuqinisekisile ku-E3 2021 ukuthi i-Starfield izokhishwa ngoNovemba 11, 2022 - ngakho-ke kusekude phambili ngaphambi kokuthi umdlalo utholakale ekugcineni. Engxoxweni, uRichard Lewis uthe umdali uqinisekile ngokufinyelela umnqamulajuqu.
Okuhlaba umxhwele kakhulu ukuthi kubonakala kuwuhlelo olukhethekile lwe-Xbox / Workstation ngalesi sikhathi, kungashiwo lutho ngokukhishwa kwe-PlayStation 5 ku-teaser noma ngabamele i-Xbox. Lokhu, kuhlanganiswe neqiniso lokuthi iMicrosoft njengamanje ingumnikazi wefemu yokuthuthukisa iBethesda, ingamemezela ukufika kwezindondo ezifana neThe Elder Scrolls 6 kanye neBlowback 5.
Funda futhi: Idethi yokukhishwa kwe-Pikmin 4 : Ingabe iyeza maduze?
Kule vidiyo engemuva kwesigcawu, isikhulu esidala u-Todd Howard, ilungu leBhodi Lesinema u-Angela Browder, kanye noMqondisi Wezobuciko u-Matt Carofano baxoxa ngombono we-Bethesda ngomhlaba njengoba uhlobene ne-Starfield.
Kulesi simo, akukho okudlula ukuvusa intshisekelo yakho kusitolimende esisha sokudubula ngokubheka phambili noma ukubuka inkanyezi, kodwa kuyenzeka. Eqinisweni, sichithe isikhathi esanele kulawo mandla okuphila sicinga indawo yonke ukuze sithole ulwazi lwakamuva lwe-Starfield nokuqagela.
Umzuzu wokuphuma emidlalweni yegeyimu yoqobo, lapho ubuntu buvela emhlabeni oshintshwe ngokungenakulungiseka yi-armageddon yomhlaba wonke, ushiwo nguGordon. Uphinde aveze ukuthi i-Starfield izoba nezinkumbulo ezi-2 zokuhamba, okuyimfihlakalo.
Ngaleso sikhathi, uCarofano uthola ukuthi i-Starfield izoba nokusekelwa okuthembekile kobuchwepheshe futhi izoba umqhudelwano ogxile kakhulu onesilungiselelo esivinjelwe kune-Rpg, phakathi kwezinye izinto. Ngo-Okthoba 2021, iBethesda yakhipha isiqeshana sevidiyo esinesihloko esithi ‘The Settled Systems,’ esinikeze umbono wezinga eliphezulu wokucushwa kukonke kwe-Starfield.
Isiqeshana, esilandiswa Umklami Oholayo We-Bethesda Gaming Studios uFelix Pagliarulo, sichaza ukuthi i-Starfield izobe idlulisela kanjani ababambiqhaza Ezinqubweni Ezimisiwe ngonyaka ka-2330, ngokusho kwewebhusayithi esemthethweni yomdlalo.
Itholakala esikhwameni esincane uma kuqhathaniswa se-Andromeda Galaxy, endaweni enwebeka ngqo isuka endaweni yethu Eyaziwayo cishe amashumi eminyaka angamashumi amahlanu akhanyayo, Izakhiwo Ezixazululiwe ziyiqoqo lezinto ezixazululiwe.
Futhi iqukethe ulwazi lwamaqembu esibili ngobukhulu omdlali, i-Allied Colonization kanye ne-Freestar Collaborative, ababambe iqhaza empini yokuchitheka kwegazi ngaphambi kokuqala komncintiswano, kodwa afinyelele isimo sokungahlaliseki kahle.
Funda futhi: I-FALLOUT 4 Isiqephu | Umdlalo wegeyimu | Izinhlamvu
Ngokuvamile, i- I-akhawunti yezokuxhumana ye-Starfield ubelokhu ekhipha amazwibela omdlalo ozayo. NgoDisemba 2021, iwebhusayithi yabelane ngezingcezu ezimbili ezintsha zobuciko bomqondo, obuqondise ezinhlobonhlobo zokucupha abadlali abazokwazi ukukubona ngesikhathi somdlalo.
Ucezu lokuqala lobuciko oludalwe ama-artisan lubonisa ukucushwa kwehlathi eliminyene, futhi i-hashtag ithembisa ukuthi njengoba uhamba, uzohlangana nezindawo eziningi ezihlukene, eziningi zazo ezinamahlamvu nezichichima, kanye nokuba khona kwansuku zonke.
Inganekwane Yesizini 3 ye-Hanuman: Izinto Odinga Ukuzazi!